ICT for Myanmar: 2009
Hand Phone Radiation
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့၂လကျော် ၃လအရောက်မှာ သနေ္ဓသားလေး အလိုလိုပျက်ကျခဲ့ပါတယ် ။ တကယ်တော ့သူမဟာ ဒီလိုကြေကွဲစရာ အဖြစ်မျိုး ခဏခဏ ကြံ ုတွေ ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ သူမတို့စုံတွဲဟာ ဆရာဝန်အများကြီးနဲ့လည်း ဒြီပဿနာရဲ့ အဖြေကိုသိဖို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ ပြ ုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကတော့ သနေ္ဓသားလေးရဲ့ သေနေတဲ့ ဆဲ(လ်)တွေကို စစ်ဆေးပြီးနောက် အဖြေထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မိခင်ရဲ့ သားအိမ်ကအဓိကကျတဲ့ ဆဲ(လ်) အချို ့ဟာ ဆဲ(လ်)ဖုန်းရဲ့ ရောင်ခြည်သင့်မှုကြောင့် သေနေပြီ ဖြစ်လို့သူမမှာ ကျန်းမာတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်မွေးဖွားဖို ့အခွင့်အလမ်းမရှိတော့ ပါဘူး နောက်ထပ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခဲ့ ရင်တောင်မှ သနေ္ဓသားဟာ နည်းနည်းရင့်လာတာ နဲ ့ပျက်စီးမှာပဲ လို့ ဆရာဝန်ကပြော ခဲ့ ပါတယ်။.
ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူမဟာ သူမရဲ့ ဆဲ(လ်)ဖုန်းကို အမြဲတမ်း သူမအလုပ်လုပ်တဲ့ ဂျာကင်င်္အကျီရဲ့ အိပ်ကပ် ( သူမသားအိမ်ရဲ့ ညာဘက်ထောင့်နဲ့နီးတဲ့နေရာ ) မှာ နှစ်ရှည်လများ ထားခဲ့မိလို့ပါပဲ။
ဒီအမျိုးသမီးလို အဖြစ်ဆိုးမျိုးမဖြစ်ရလေအောင် အောက်ပါအချက်များကိုသတိပြ ုကြပါ။
၁။ ဟန်းဖုန်းရဲ့ ရောင်ခြည်သင့်မှုကြောင့် ကျွန်မတို့ ရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါ နှင့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ကျေးဇူးပြ ုပြီး သတိမလွတ်ပါစေနှင့် ။
၂။ အသုံးမလိုလျှင် တတ်နိုင်သမျှု ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဝေးသောနေရာတွင်ထားပါ။
၃။ အမျိုးသားများ မိမိတို ့ရဲ့ကျောက်ကပ်နှင့်နီးသော ဘောင်းဘီအိပ်တွင်ထည့်ခြင်းကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၄။ ကလေးငယ်တွေရဲ့ နုနယ်တဲ့ ဦးနှောက်ဆဲ(လ်)တွေကို ရောင်ခြည်မသင့် စေဖို ့အတွက် တတ်နိုင်သမျှ ကလေးတွေနဲ့ဝေးရာမှာထားပါ။
၅။ကလေးငယ်များသည် ကြီးထွားစအရွယ်တွင် အရမ်းကိုနူးညံ ့ပါသဖြင့် ဟန်းဖုန်းနှင့် မကစားပါစေနှင့်။
၆။အိပ်စက်ချိန်တွင် ဖုန်းကို မိမိအိပ်ယာတွင်မထားပဲ မနီးမဝေးတွင်ထားပါ။
၇။ တတ်နိုင်သမျှ တီဗွီကဲ့သို့သော ရောင်ခြည်သင့် သည့် အရာများကို မိမိရဲ့ အိပ်ခန်းတွင်မထားပါနှင့် ( တီဗွီသည် ပိတ်ထားယုံနှင့် ရောင်ခြည်သင့်မှု မှ ကင်းလွတ်ပြီဟု မပြောနိုင်ပါ။)
တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းခဲ့ပါက ဘာသာပြန်သူကျွန်မ နှင်းဆီခင်းလေး ရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။
How to get Social Visit Visa of Singapore
Most of the people from Myanmar are working at oversea because of numeric reasons. Among them some are joined with agent. Some are joined to school first after finished school they hunt for job themselves. Some are applied dependent pass and after they got long term pass they try to get job.
There arealot of rules and regulations depend on country where you want to go.
Among the countries I just want to share you about Singapore. As I studied from GTC most of my friends from there are intend to work at Singapore because Singapore has high standard technology and very safe for people. And one more thing is not so far from Myanmar.
There arealot of people working in Singapore with different fields (Doctor, Manager , Engineer, Secretary, Technician, Accountant, Hotel and management, Safety officers, Supervisors, Sales promoter, Nursing, General worker, Painter, Electrician, Foreman, Driver, Scaffolding, Piping, Welder, Construction, Cleaner, Drafts Man, QA/ QC, Administration, Technical Assistant, Waiter, Waitress, Helper, Maid, Chef cook, and so on . They tried to get job with different ways.
Some are joined with agents from Myanmar and after they got job and work permit they come to Singapore. But agent fees is high for me and (some of my friends).Agent fees also different based on your job. For the professional jobs with special pass (s’pass) normally we need to pay S$4500 + Air Ticket. For me I can’t afford like this amount. That’s why I tried to Singapore with social visit visa.
Do you have Singaporean / Singapore Permanent Residence relatives or friends in Singapore?
A.)If your answer is yes, it’s very easy for you to get visa.
Firstly , you asked them to send you invitation / sponsor letter together attached with their IC photocopy via email or parcel.
Once you got it you go and buy air ticket round trip (yangon-singapore-yangon) .Please don’t buy 1 month ticket. ( Unluckily if you can’t findajob you need to buy new one )
After you buy air ticket you can go to Singapore embassy to apply social visit visa.
Here you can check address and operating hour. mfa.gov.sg
Address : 238 Dhamazedi Road, Bahan Township , Yangon
Telephone : (95) 1 559001
Fax : (95) 1 559002
Visa Fax : (95) 1 559921
E-Mail : singemb_ygn@sgmfa.gov.sg
Operating Hour: 8:30 am to 1:00 pm , 2:00 pm to 5:00 pm
Visa Hours: Monday to Friday 9:30 am to 11:30 am ( Visa Application )
Monday to Friday 2:30 pm to 4:00 pm ( Visa Collection )
The Embassy is closed on Saturdays, Sundays and Public Holidays
You are required to submit following documents
3.One color passport size photo
4.Photocopy of your round trip air ticket to Singapore
5.Photocopy of the bio data page of your passport
6.Non refundable visa fees will be FEC13.
After4working days you can go and collect your passport attached with 1 month Singapore social visit visa.
B) If your answer is No, it may bealittle bit difficult
If you do not haveaSingapore citizen/PR to act as your sponsor, you
have to place FEC648 as security deposit with the Embassy before you can be
granted an entry visa.
If you never come back within the granted duration Singapore embassy won’t be refund this deposit.
If you don’t want to pay deposit to embassy there is another way for you it is to join with agent . You can also ask at air ticket selling services.
--- Although you have sponsored if you don’t want to go yourself to embassy they will serve you about US 30.
--- Not only you do not have sponsor but also you are not available to give deposit they will serve you about US 50.
( The fees may be variable depends on agent and situation )
May all my friends get successful job in Singapore.
အမှန်သည် အမှား … အမှားသည် အမှန်
အဲဒီလို မဟူရာရောင် ပုတ်အက်အက်ရန့ံဆန်တဲ့
written by: နှင်းဆီခင်းလေး
အချိန် သာလျှင်် အချစ် ၏
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကပေါ့ ဘဝဆိုတဲ့ ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်း ပေါ်မှာ ချစ်ချစ်၊ ပျော်ပျော်၊ ငိုငို၊ ပညာရှိ တို ့နဲ ့အတူ အခြားသူငယ်ချင်းတွေ စုစည်းနေခဲ့ကြတယ်။
တနေ ့မှာတော့ ဘဝကျွန်းလေးကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လေမုန်တိုင်းတွေဝင်ပြီး ပင်လယ်ရေအောက်ကို စုန်းစုန်းမြ ုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတိပေးချက်တွေ ထွက်လာပါတယ်။
ကျွန်းသူ ကျွန်းသားတွေ အားလုံးဟာ သူတို ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လှေလေးတွေနဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ကနေ မြန်မြန်
ပြေးနေကြတဲ့ အချိန်မှာ ချစ်ချစ်တစ်ယောက်ကတော့ သူချစ်တဲ့နေရာလေးမှာ နေခွင့်ရသမျှနေမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့တဝုန်းဝုန်းတက်လာတဲ့ လိှ ုင်း လုံးကြီးတွေကို ငေးမောကြည့်နေခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံး သူမရဲ့ လှေလေး လည်း ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရေလိှုင်းတွေအောက်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။
ကျွန်းတစ်ခုလုံး ရေအောက်ကိုရောက်တော့မယ့် အချိန်ရောက်မှ “ ဟာ ငါ တစ်ယောက် တည်း ကျန်တော့ ပါလား ငါဒီနေရာကနေ ပြေးမြှဖစ်တော့ မယ် “ ဆိုတဲ့ အသိ၀င်လာပါတယ်။
သူ ့လှေ လေး ချည်ထားတဲ့နေရာ မှာ မရှိမှန်းလည်းသိရော ချစ်ချစ်လေးဟာ ကြောက်ကြောက်နဲ့တွေ ့ရာလူကို အကူအညီတောင်းဖို့ဟိုဟို ဒီဒီ ကြည့်နေခဲ့တယ်။
ပထမဆုံးချစ်ချစ်တွေ.တာကတော့ ကြီးမား ထည်ဝါလှတဲ့လြှေကီးနဲ့ကိုချမ်းသာကြီးပေါ.
သူမလေးက ၀မ်းသာအားရ နဲ့“ ကိုချမ်းသာကြီး ချစ်ချစ် ကိုချမ်းသာကြီးလှေနဲ့လိုက်ပါရစေနော် “
လို့အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်----
ဒါပေမယ့် စည်းစိမ်မက်တဲ့ ကိုချမ်းသာက “ ဟာ ၀မ်းနည်းပါတယ် ခင်ဗျာ ကျွန်တော့် လှေပေါ်မှာ ပေါ်မှာ ရျွှေတွေ ငွေတွေနဲ့ပြည့်နေလို့နေရာလွတ် မရှိ တော့ပါ ဘူး” လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။
ချစ်ချစ်လေးဟာ နောက်ထပ် တွေ့တဲ့ ခမ်းနားလှပတဲ့ ရွက်လြှေကီး နဲ့ကိုမာနကြီး ကို သူမလေးကို ကယ်ဖို့ထပ်ပြောခဲ့တယ် ။
“ စိတ်မကောင်းပါဘူး မိချစ် ရယ် နင့် ရဲ့ တကိုယ်လုံး က စိုစွတ်နေတယ့် အတွက် ငါ့ရဲ့ လှပတဲ့ လှေ ကို အပျက်အစီးမခံနိုင် လို ့ပါ “ ဆိုပြီး သွေးကြီးတဲ့ ကိုမာနကြီး က ထား ခဲ့ပြန်တယ်။
စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီး မျက်ရည်တွေဝဲနေတယ့် သူမလေးဟာ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း ငိုငို့ကို ထပ်တွေ့လိုက်ပြန်ပါတယ် “ ငိုငိုရေ ငိုငို ငါ့ ကို ကယ်ပါ ဦးဟာ “ ဆိုပြီး အားကိုးတကြီး တောင်းပန်ခဲ့ ပါတယ် “ ဟာချစ်ချစ်ရယ် ငါ့ ကို တစ် ယောက် တည်း သွားခွင့် ပြုပါဟာ “ ဆို ပြီး သူမလေး ကျန်ရစ် ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ကူရာမဲ့နေတဲ့ သူမလေးဟာ ဟိုးခပ်လှမ်းလှမ်း မှာ စီးမျောလာတဲ့ ပျော်ပျော့် ကို ရှိ သမျှအားလေးနဲ့အော်ဟစ်ပြီး သူမကို ကယ်ဖို့ပြောပြန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ပျော်ပျော် က မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပိုဝေးရာကို လှော်ခက်သွားပါတယ်။
ဘယ်သူမမရှိတော့တဲ့ ဘဝကျွန်းလေးမှာ တဖြည်းဖြည်း ၀ါးမြိုနေတယ့် ပင်လယ်ရေလိှုင်းတွေကို ကြည့်ရင်း သူမသေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ငိုကြွေးနေတုန်း မှာပဲ “ အချစ်ရေ ညီမလေးရေ ဒီလှေပေါ်ကိို မြန်မြန်တက်ပါ မင်းကိုငါ ဘေးလွတ်ရာ ကို ခေါ်ဆောင် သွားပါ့မယ် “‘ ဆိုတဲ့ အင်မတန်မှ နုူးညံ့ညင်သာတဲ့ အသံလေး ကို ကြားလိုက်ရပါတယ်
အရမ်းအံ ့သြ ပြီး ပျော်ရွင်သွားတဲ့ ချစ်ချစ်လေးဟာ လှေပိုင်ရှင် အစ်ကိုကြီးရဲ့ နာမည် ကို မေးဖို ့တောင် မေ့လျော့သွားပါတယ်
ဘေးကင်းတဲ့ ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းမှာ ချထားခဲ့ပြီး ပင်လယ်ပြင်ကို ပြန်လည် ရွက်လွှင့် သွားတဲ့ အချိန်ရောက်မှ ချစ်ချစ်လေးဟာ သူမရဲ့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင် ဟာဘယ်သူပါလိမ့် ဆိုပြီး သိိချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ် လာပါတယ်
ယောင်ချာချာဖြစ်နေတယ့် ချစ်ချစ်လေးဟာ ကိုပညာရှိကြီးနဲ့ကျွန်းပေါ်မှာ စုံစည်းခဲ့ ပါတယ်
“ ကျမရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တာ ဘယ်သူပါလဲ ရှင့် ” လို့တွေ့ရင်တွေ့ချင်းပဲ သူမလေးက မေးခဲ့တယ် “ အဲဒါ အချိန်ပေါ့ ကွယ့်” ပညာရှိကြီးက ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်
“ အို သူများတွေမကယ််ချင် လို့ထားခဲ့တဲ့ သေခါနီးဆဲ ဆဲ ကျွန်မကို ဘာလို ့များကယ်ခဲ ့တာပါလိမ့် “
လို့ထပ်မေးခဲ့ပြန်ပါတယ်
အဲဒီအချိန်မှာ အရမ်းကို ပညာရည်ပြည့်ဝတဲ့ အပြံ ူး မျ ူိးနဲ့ပြံ ုးရင်း ပညာရှိကြီးက ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
“ အချစ်ဆိုတာ ဘယ်လောက် တန်ဖိုးရှိပြီး မြင့်မြတ် တယ်ဆို တာ ကို အချိန် ကသာလျှင်နားလည် နိုင်စွမ်းရှိလို့ပေါ့ကွယ် “ တဲ့ xxxxxxxx
Source: Best Love Stories , Title : Time Understands Love By: Unknown
ဘာသာပြန်သူ ------ နှင်းဆီခင်းလေး
H1N1 အကြောင်း Mail တွေကို သတိထားပါ
လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရေပန်းအစားဆုံးက အမေရိကန် သမ္မတမဟုတ်သလို၊ ရုပ်ရှင်
သရုပ်ဆောင်တွေ၊ လက်နက်ဆန်းတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားတွေကို လျှင်မြန်စွာ
တိုက်ခိုက် ဖျက်စီးသွားနိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ ကပ်ရောဂါ တစ်မျိုးပါ။ (H1N1)
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါကို အကြောင်းပြု ပြီးတော့ အမှောင်ခြမ်းမှာ
ရှိတဲ့သူတွေက ကမ္ဘာကွန်ရက်ထဲမှာ အဖျက်လုပ်ငန်း တွေလုပ်လာနေကြပါပြီ။
(H1N1) အကြောင်းကို ဖော်ပြထားတဲ့ e-mail တွေကို လူတွေဆီ
ပို့ပြီး တိုက်ခိုက်မှု ပြုလာတာပါ။ ဒီ e-mail မှာပါတဲ့ link တွေကို click
ခေါက်မိလျှင်တော့ Qhost.NJI ဆိုတဲ့ Trojan ၀က်ရောက်တာကို ခံရမှာပါ။ ဒီ
Link က မက္ကဆီကန် ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဆီသို့ ဆွဲခေါ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး
ဒီဆိုက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Trojan က ၀င်ရောက်သွားမှာပါ။ မက္ကဆီကို ဆိုက်ဟာ
တရားဝင်ဆိုက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဖောက်ထွင်းခံထားရပြီး တိုက်ခိုက်သူတွေရဲ့
ထိန်းချုပ်မှုကို ခံထားရတာကြောင့် ယခုလို Trojan တွေရှိနေတာလို့ Sonic
Wall က intivirus သုတေသန ဌာနရဲ့ မန်နေဂျာ Nick Bilogorskiy က
[AH1N1 အီးမေးလ်များ သတိထားသင့်] Qhost.NJI ဆိုတဲ့ Trojan ဟာ
ဘဏ်တွေကို log in ၀င်ရောက်တဲ့ သတင်းအချက် အလက်တွေကို မှတ်သားဖို့
အထူးပြုလုပ် ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Visual Basic ထဲမှာ code တွေကို
ရေးထားတာ ဖြစ်ပြီး Windows သုံးစွဲတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေမှာ အရေးပါတဲ့
ဖိုင်တွေကို ပူးပေါင်းပြီး ချိန်းယူလိုက်တာ ကွန်ပျူတာထဲမှာ စောင့်ကြည့်သူ
အဖြစ် နေနေပါတော့တယ်။ အင်တာနက်ထဲကို ၀င်ရောက်ပြီး log in တစ်ခုခုကို
၀င်လိုက်တာနှင့် တစ်ပြိုင်နက်မှာ လိုက်လံမှတ်သားမှုတွေကို ပြုလုပ်နေမှာ
သိပ်မကြာခင် ရက်တွေအတွင်းက Symantec ကပြောခဲ့သလို PDF
တွေကြောင့် ပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့ရပြီး နောက်ပိုင်း အရေးပါလာတဲ့
ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်မသိတဲ့ သူတွေဆီက ဖြစ်စေ link
တွေပို့လာလျှင် အလွယ်တကူ click မခေါက်ကြဖို့ လုံခြုံရေး ပညာရှင်တွေက
Source : Forward Mail
အခိုးခံရသော Gmail အားပြန်လည်ရယူခြင်း
သင့် ဂျီမေးအခိုးခံလိုက်ရပြီဆိုပါတော့။ password ရော security questionရော
secondary email ပါ အပြောင်းခံလိုက်ရပြီဆိုပါတော့။ သင်ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ဒီအတွက်
မပူပါနဲ့။ ဂျီမေးက သင့်အတွက် service တခုပေးထားပါသေးတယ်။
ဂူဂဲက ပေးထားတဲ့ ဖောင်ကိုဖြည့်ရပါမယ်။ account နဲ့ပက်သက်တဲ့
အချက်အလက်အသေးစိတ်တြွေဖည့်ရမှာပါ။ account ဖွင့်ထားတဲ့လူသာ
နောက်ဆုံး လော့အင်ဝင်ခဲ့တ ဲ့ရက်စွဲ၊
အကောင့် စဖွင့််ခဲ့တ ဲ့ ရက်စွဲ၊
အဲဒီအကောင့်နဲ့ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ Google ရဲ့အခြား products တွေအကြောင်း၊
Google Blogger အသုံးပြုရင် အဲဒီ Blogger Account ရဲ့အချက်အလက်အသေးစိတ်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ မေးခွန်းတွေကိုဖြေရာမှာ အသေးစိတ်နဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးတိတိကျကျ
သင့်အကောင့် သင်ပြန်ရမရဆိုတာ သင့်အဖြေက ဘယ်လောက်နီးနီးစပ်စပ်မှန်လဲဆိုတဲ့ပေါ်မှာ
ဖောင်ပို့လျှင် တဖောင်သာ ပို့ရန် (ဖောင်အများကြီးမပို့ရန်)၊
ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကို အမြဲအသုံးပြုနေကြ စက်(PC) ကပဲပို့ရန်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
သင့်ဖောင်ပို့လိုက်တဲ့ IP address ကို Googleကမှတ်သွားမှာမို့လို့ပါ။
ဒီ Form ပါမေးခွန်းများကိုသုံးပြီးတော့ ကိုယ့်အီးမေးသူများခိုးယူခြင်းမှ
ကာကွယ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုကာကွယ်မှာလဲ?။ လွယ်ပါတယ်။မေးခွန်းတွေကိုလေ့လာပြီး
ကိုယ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလုံခြုံတဲ့တနေရာ မှာသိမ်းထားလိုက်ပေါ့။ နောက်
အီးမေးအခိုးခံရတိုင်း အဲဒီအချက်အလက်အတိုင်းဖြေပြီး ပြန်ရအောင်ယူပေါ့။
Form ဖြည့်ရန် သွားရမယ့်လိပ်စာကတော့
source: www.forverfriends.ning.com မှကူးယူတင်ပြသည်။
I hope you will like it!!!!!
I'm sharing what I got****
ကယ်…အားလုံး… လက်နှစ်ဖက်ကို ဘုရားရှိခိုးတဲ့ပုံစံကိုပြုလုပ်လိုက်ပါ။ လက်ခလယ်ကိုခေါက်လိုက်ပြီး လက်ခလည်ရဲ့ကြောချင်းကြောထိအောင် ခေါက်ကွေးထားဖို့လိုမယ်နော်။ ကျန်တဲ့လက်ချောင်းများက ထိပ်ချင်းထိပ်ထိနေပါစေ။
ဒီကစားနည်းကို မကစားခင်မှာ လက်ငါးချောင်းက ဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာကို ပြောပြပါမယ်။
လက်မထိပ်ကို ထိလိုက် ခွါလိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ လက်မဆိုတာ မိဘကိုဆိုလိုတာပါ။ လက်မကိုခွါလို့ ရပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ အိုနာသေရမယ်ဆိုတာရှိတယ် ဒါကြောင့် ခွါလို့ရတာပါ။
နောက်လက်မကိုပြန်ထိလိုက်ပြီး လက်ညိှုးကို ခွါကြည့်ပါ။ လက်ညှိုးကတော့ ညီအကိုမောင်နှမပါ။ သူတို့တွေလည်းကိုယ့်အိမ်ထောင်နဲ့ သူဖြစ်သွားရင် သင့်ကို ခွဲသွားမှာပဲ။
နောက်လက်ညှိုးကိုထိပ်တြွေပန်ထိထားပြီး လက်သန်းလေးကို ထပ်ခွါကြည့်ပါ။ ဒါကတော့ သားသမီးတွေပါ။ သူတို့လည်း ခွဲခွါကြမှာပါ။
ဒါဖြင့် နောက်ဆုံးလက်သူကြွယ်ကို ခွါကြည့်ပါ။ ခွါလို့မရပါဘူး။ ဒါဟာ တစ်သက်တာထာဝရလက်တွဲဖော်ပါ။ ဆေးပညာအရ အကြောတွေကအရမ်းကပ်နေလို့ ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတွေ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို လက်ထက်လက်စွပ်ကို လက်သူကြွယ်မှာ စွပ်ရတယ်ဆိုတာကကော ဆေးပညာကသတ်မှတ်ထားတာလား။ တိုက်ဆိုင်လို့များလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ….. အချစ်စစ်ဆိုတာ ခွဲလို့မရပါဘူး။
၁။ အသင်သည် ဟောခန်းအတွင်း ဟိုမှ သည်မှ ဖြတ်လျှောက်သောအခါ လက်ထဲတွင်
စာရွက် တစ်ရွက် အမြဲပါပါစေ။ လက်ထဲမှာ စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ ဟိုမှ သည်မှ
ဖြတ်လျှောက်သူသည် အများအမြင်တွင် အရေးပေါ် အစည်းဝေးအတွက် အလုပ်
ကြိုးစားနေသရောင် ထင်စေ၏။ စာရွက် မပါတဲ့သူကတော့ ကော်ဖီဆိုင် သွားမည့်
အလား ဆင်တူသည်။ အဲ..သတင်းစာကို ကိုင်ပြီး ဖြတ်လျှောက်သူကတော့ ရေအိမ်
၂။ သာမာန် အလုပ်ဖြစ်သော်ညား အလုပ်များ နေသည်၊ ကြိုစားနေသည်ဟု
အများထင်အောင် ကွန်ပျူတာကို သဲကြီးမဲကြီးကြည့် ကာ လုပ်ပါ။ အများအမြင်တွင်
တင့်တယ်၏။ အလုပ်မရှိက မိမိ ပါစင်နယ် မေးချက်ခြင်း။ မိမိ လစာတွက်ခြင်း
များ လုပ်နိုင်သည်။ ချက်တင် ၀င်ပါက သတိထားပါ။ တစ်ယောက်ထဲ
၃။ လုံးဝအလုပ်မရှိသည့်အခါ မိမိ ၀က်ဘလော့၏ တန်းပလိတ်ပြင်ခြင်း။ ဘလော့
နှင့်ပတ်သက်သော နည်းပညာ လေ့လာခြင်များ လုပ်ပါ။ သင်၏ အထက် အကြီးကဲ (သို့)
သဌေးမှ တွေ့ရှိသွားပါက ရှေ့လာမည့် ပရောချက် အတွက် နည်းပညာ ဆော့ဝဲအသစ်များ
လေ့လာနေသည်ဟု ဖြေပါ။ သင့်အားချီးကျူး ပေလိမ့်မည်။
၄။ သင်၏စားပွဲအား စာရွက်များ ဖိုင်များဖြင့် ရှုပ်ပွနေပါစေ။ ဧကန် ထိုသူသည်
အလုပ်များသောသူဖြစ်ပေသည်။ အလုပ်ဖေါ်တစ်စုံတစ်ဦး သင့်စားပွဲနား ကပ်လာပါက
“အရမ်း အလုပ်များတာ.. ရှင်းဖို့အချိန်မရဘူး” စသည် အိုက်တင် ဖြင့် ပြောပါ။
ထိုသို့ပြောရင်း စာရွက် တစ်ခုအားရှာနေပါ။ လက်တစ်ဖက်က မောက်စ်ကို မလွတ်
၅။ အလုပ်အား အခြားသူများထက် စောရောက်အောင် လေ့ကျင့်ထားပါ။ (အီးမေးချက်ပါ)
ထမင်းစားချိန် များတွင် အခြားသူများ ထသွားလဲ မိမိသည် အလုပ်များနေသေးသည်
သကဲ့သို့ အခန်းထဲမှ နောက်ဆုံးထွက်ပါ။ (ဂျီ တော့ခ် မှ သူငယ်ချင်းများအား နှုတ်ဆက်ပါ)
မိတ်ရွှေ အားလုံးပဲ အလုပ်ထဲမှာ အဆင်ပြေကြပါစေ။
သူငယ်ချင်းတဟ်ယောက်ပို ့လာတဲ့ ဖော်ဝပ်မေးလ်ကပါ။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘာလို့ မဝေးချင်ပဲ ဝေးသွားကြရတာလဲ
ငါ့သူငယ်ချင်းတော့ အလုပ်တွေနဲ့ရှုပ်နေမှာပဲ လို့နှစ်ယောက်လုံး တွေးနေကြရင်း နှုတ်ဆက်လိုက်ရင် သူ့အတွက် အနှောက်အယှက်များ ဖြစ်သွားမလား လို့တွေးပြီး ဒီတိုင်းပဲ နေလိုက်ကြရင်းနဲ့
နှစ်ယောက်လုံးက တခြား နားလည်မှုပေးနိုင်မယ့် သူငယ်ချင်းကို တောင့်တလာတယ်။ နောက်တော့ နှစ်ယောက်လုံးက သူတောင်နေနိုင်သေးတာပဲ ငါကဘာလို့ စခေါ်ရမှာလည်း လို့တွေးပြီး စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်သလိုဖြစ်လာတယ်။
အဲဒါနဲ့ပဲ အချစ်က အမုန်းတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတယ်
နောက်ပိုင်းတော့ အရင်က ခင်ခဲ့တယ် ဆိုတာတောင် မှတ်ညဏ်ထဲမှာ မှေးမှိန်လာပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မေ့သွားကြရော
ဒါကြောင့် အမြဲတမ်း ကိုယ်နှစ်လိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ထိတွေ့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင် ပါတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ အဲလိုနဲ့ ဝေးသွားတာမျိုး မဖြစ်ချင်ဘူးဗျာ
ဒါကြောင့်ဒီစာလေးကို ကျွန်တော်ရဲ့ ချစ်လှစွာသောသူငယ်ချင်းများဆီကိ
ု အခုပဲ ပို့ပေးလို်က်ပါပြီ
ဒီတော့ အဲလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလည်း ဆိုတော့
ဟေ့ သူငယ်ချင်း နေကောင်းလား မင်း အလုပ်တွေရှုပ်နေလား ငါ မင်းကို သတိရနေတာ
အဲလိုလေး ပြောကြည့်ကြမယ်လေ အိုကေလား
ကျွန်တော်ကိုလည်း ဒီလိုမျိုး နှုတ်ဆက်ကြည့်ပါလားဗျာ။
မိန်းမတစ်ယောက်သည် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးချင်သည်ဟု ဆိုသည်..။ သို့နှင့် ဆရာဝန်က “ ပြောပါခင်ဗျာ...ဘာရောဂါ၊ ဘာပြသနာများ ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ ” ဟု မေးသည်။ ထိုအခါ လူနာ မိန်းမက
“ အင်း....ကျွန်မ..ကျွန်မ ” ဟု ဘယ်က စပြောရမှန်း မသိ ယောင်ချာချာဖြစ်နေသည်။ နောက်တော့“ ကျွန်မ အိပ်မပျော်တဲ့ ရောဂါရနေတယ် ထင်တယ် ဆရာ ” ဟု မဝင့်တဝင့် ပြောသည်။ ထိုအခါ ဆရာဝန်က...“ ဟုတ်ပါပြီ....ခင်ဗျာ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ အကြံပေးချက်တွေနဲ့ ကျွန်တော့ ဆွေးနွေးတဲ့ အချိန်တွေ အတွက် တစ်နာရီကို ဒေါ်လာ 80 ကျပါမယ် ” ဟု ပြောသည်။ ထိုအခါ လူနာ မိန်းမက ဝမ်းသာအားရနှင့် ...........“ ရပါတယ် ဆရာ၊ ငွေက အရေးမကြီးပါဘူး..။ တကယ်လို့ တစ်ညလုံးဆိုရင်ရော ဆရာ ဘယ်လောက် ယူပါသလဲရှင် ”...။
........ ........ တစ်ညလုံးကြီးများတောင်...
....ငွေချူမြို့၊ ခါးပိုက်နှိုက်ရပ်၊ အကြွေးထူလမ်း၊ အမှတ်(၁၅၀၀) နေ......
(ဦးငွေမက်+ ဒေါ်ချူစား)၊ ဦးငြွေကွယ်+ ဒေါ်မာယာမြူတို့၏ မြေး...
ဦးလောဘ ( နယ်လှည့်လိမ်စား ကုမ္ပဏီ ) + ဒေါ်ဓနရှင် တို့၏
ဒသမမြောက်သား......မောင် ဂျလေဘီထောင်ထွက် ( လယ်ရာလယ်စားရေး ကုမ္ပဏီ ) နှင့်
.....မစိန်မြို့၊ ပတ္တမြားမြို့နယ်၊ ကျောက်စိမ်းလမ်း၊ အမှတ် ( ၅၂၈ ) နေ......
ဦး မဟူရာ မဲနက်ကျော် (ရွှေပေါင်ကုမ္ပဏီ) + ဒေါ်နီလာဝင်းဝင့်ကြွယ် တို့၏
ဒါဇင်ကျော်မြောက် သမီးလတ်.........မကြွားဝါဝါမဲနီ လာဝင်းဝင့်ကြွယ် (တီကောင်ရောင်းဝယ်ရေး ပွဲစားကုမ္ပဏီ)
တို့သည် ၀၈-၂၁-၀၈၊ ကလေးမြို့ပြင် သုသာန်ဇရပ်၌ ဂုဏ်သရေရှိ ဂျလေဘီများ၊ ထောင်ထွက်လူကြီးမင်းများ၊ ဝရမ်းပြေးများနှင့် လောင်းကစားသမားများ ရှေ့မှောက်၌ လက်မှတ်ရေးထိုး လက်ထပ်ပြီးစီးကြောင်း။
( နှစ်ဖက်သော မိဘများနှင့်
မောင်ဂျလေဘီထောင်ထွက် + မကြွားဝါဝါမဲနီလာဝင်းဝင့်ြ ကွယ်)
အဘွားအိုတစ်ဦးဟာ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး မကြာသေးတဲ့ ချွေးမကို ကြည့်ဖို့ သားအိမ်ကို ရောက်သွားခဲ့တယ်။ လူခေါ်ဘဲလ်တီးပြီး တံခါးဖွင့်လာတော့ ဘာအဝတ်အစားမှ ၀တ်မထားတဲ့ ချွေးမကို တွေ့လိုက်တယ်။ ချွေးမကို ကြည့်ပြီး အဘွားအိုက အလန့်တကြား မေးတယ်။ > > " ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ" > "ယောကျာ်းအပြန်ကို စောင့်နေတာလေ" > "ဘာမှ မဝတ်ဘဲ စောင့်နေရသလား" > "ဒါကို ညဝတ်အိပ် အချစ်အင်္ကျီလို့ ခေါ်တယ်" > "လုံးဝ ၀တ်မထားတာကို ဘာ ညဝတ်အင်္ကျီလို့ ခေါ်တာလဲ" > "ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ယောက်ျားက ဒီညဝတ်အင်္ကျီကို ကြိုက်တယ်ရှင့်" > > ချွေးမကို ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ဘဲ အဘွားအို လှည့်ပြန်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရောက်တာန့ဲ အဘွားအိုဟာ ရေမိုးချိုး၊ အမွှေးအကြိုင်တွေ ဆွတ်ပြီး ဘာအဝတ်အစားမှ မဝတ်ဘဲ တံခါးဝမှာ သွားရပ်နေခဲ့တယ်။ > > တအောင့်ကြာတော့ အဘိုးအို ပြန်ရောက်လာတယ်။ အဝတ်ဗလာနဲ့ ရပ်နေတဲ့ အဘွားအိုကို မြင်တော့ လန့်ပြီး "ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ" လို့ အော်လိုက်တယ်။ > > "ဒါ ညဝတ် အချစ်အင်္ကျီလေ" လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တော့ အဘိိုးအိုက > " ဟာ မင်းညဝတ်အင်္ကျီက မီးပူထိုးသင့်နေပြီ။ ကြည့်စမ်း ဟိုကြယ်သီးနှစ်လုံးကလဲ ပြုတ်ထွက်တော့မယ်" လို့ ပြန်ပြောလိုက်သတဲ့။
( အတုမြင် အတတ်သင်တတ်တဲ့ သယ်ရင်းများအတွက်၊ အတုခိုး မမှားကြစေဖို့ )
အတန်းတတန်းတွင ်ဆရာမက ကျောင်းသာများက ိုမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်အကြေ ာင်း မေးနေသည်။ ဆရာမက ကျောင်းသားတစ်ဦးအား ......."ဟဲ့...အမေရိကန်ပြည်တွင် စစ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့သမ္မတကိုပြောစ မ်း" ကျောင်းသားက......."လင်ကွန်းပါဆ ရာမ"........အေးဒါဆိုသူ့မိန်းမန ာမည်ကဘာလဲ'"...... "မယားကွန်းပါဆရာမ"
....... ..... လွယ်လွယ်လေး နှော....။
လူတစ်ဦးသည် ညစာစားပွဲတစ်ခုမ ှသောက်စားပျော်ပါး၍ အိမ်သို့ပြန်လာရာ အိမ်ပေါ်အရောက်၌ အမူးလွန်ကာ ခလုတ်တိုက်ပြီး မေ့လဲသွားလေသည်။ ထိုအခါ မိန်းမဖြစ်သူက ဆရာဝန်ဆီ ဖုန်းဆက်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ရှာရာ မတွေ့သဖြင့် သူ၏သားဖြစ်သူအားခေါ်၍.....
မိန်းမ။ ။ သားလေး...သွား အပေါ်ထပ်မှာအိပ်နေတဲ့ မင်းဦးလေးကိုသွားနှိုးပြီး ဒေါက်တာ့ဖုန်းနံပါတ်မေးကြည့်စမ် း
သားဖြစ်သူ။ ။ ဟာ...မေမေကလည်း ဒါများ ဆရာဝန်ဆီဖုန်းဆက်ပြီး ဖုန်းနံပါတ ်ဘယ်လောက်လဲ မေးလိုက်ပေါ့။
မိန်းမ။ ။ ဟဲ့...နင်တော်တော်တုံးပါလား.... .......ဖုန်းနံပါတ်မသိပါဘူးဆိုမှဘယ်လိုဖုန်းဆက်မလဲ...ကဲ..က ဲ
ဆရာဝန်ဆီသွားပြီး ဖုန်းနံပါတ ်ဘယ်လောက်လဲမေးပြီး ပြန်လာခဲ့..ဟဲ့..မြန်မြန်ပြန်လာ ခဲ့နော်
ကိုလူလည်ရဲ့ အိမ်မက် အဆုံးပိုင်း
ဧည့်သည်များရှေ့တွင် လူတစ်ဦးက အခြား တစ်ဦးကို ပြက်ရယ်ပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်.......
“ တလောက ငါ အိမ်မက် မက်တယ်ကွ။ အိမ်မက်ထဲမှာ မင်းနဲ့ငါနဲ့ အတောင်ပံတွေ ပေါက်ပြီး ထပျံကျတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝေးဝေးကို မပျံနိုင်ဘဲ မြေပေါ်ကို ပြန်ကျလာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ငါက ပျားရည်တွေ အပြည့် ရှိတဲ့တွင်းထဲကို ကျပြီးတော့၊ မင်းကတော့ အညစ်အကြေးတွေ ရှိတဲ့ တွင်းကြီးထဲကို ကျသွားတယ်တဲ့ကွာ..... ”
အဲလိုနဲ့ ဟာသဉာဏ်ရှိတဲ့ ကိုလူလည်ကလဲ ပြန်ပြောတာပေါ့.......
“ အံ့သြစရာ ကောင်းလိုက်တာကွာ၊ ငါလဲ အဲဒီ အိမ်မက်ကို အဲဒီ အတိုင်းမက်တယ်ကွ။ ဒါပေမယ့် ငါက ရှေ့ဆက်ပြီး ဆုံးတဲ့ အထိ မက်ခဲ့သေးတာ ”
“ ဘာတွေ ဆက်ပြီး မက်ခဲ့လို့လဲကွ ”
“ ငါတို့တွေ တွင်းအသီးသီးကနေ ပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန် လျှာနဲ့ လျက်ကြတယ်လေ ”
ဆရာမက ကလေးတွေအား “ ကြီးလာရင် ဘာဖြစ်သလဲ...ပုံဆွဲပြပါ ” ဟု ခိုင်းလေသည်။ ကလေးတစ်ယောက်က လေယဉ်မူူးပုံ ဆွဲသည်။ အခြား တစ်ယောက်က ရဲသားပုံ ဆွဲသည်။ တစ်ယောက်ကတော့ မျက်လှည့်ဆရာပုံ ဆွဲသည်။ အဲ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကတော့ လက်နှိပ်စက် စာရေးမပုံ ဆွဲသည်။ ကောင်မလေး တစ်ယောက်တော့ ဘာမှ မဆွဲ......။ သူ့ စာရွက် လွတ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာမက.......“ သမီး ဘာဖြစ်လို့ ဘာမှ မဆွဲတာလည်း ကွယ် ”
“ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ဆရာမ ”
“ ဒါဆို ဘာလို့ ပုံမဆွဲတာလဲကွယ် ”
“ သမီး လက်ထပ်ချင်တယ် ဆရာမ။ အဲဒါ ဘယ်လိုဆွဲရမှန်း မသိလို့ပါ ”
တရားသူကြီး ။ ။ “ မင်း ယောကျင်္ားကို ထီးနဲ့ ရိုက်လိုက်တာ ထီးကျိုးသွားတယ်လို့ ဆိုတယ်..။ ကဲ..အဲဒါ မင်းဘာပြောချင်သလဲ ....။
တရားခံ အမျိုးသမီး ။ ။ “ မတော်တဆ ဖြစ်သွားတာပါ တရားသူကြီးရှင့် ”
တရားသူကြီး ။ ။ “ ဒါ ဘယ်လိုလုပ် မတော်တဆဖြစ်နိုင်မှာလဲ ”
တရားခံ အမျိုးသမီး ။ ။ “ ကျွန်မမှာ ထီးကျိုးစေချင်တဲ့ ဆန္ဒလုံးဝမရှိပါဘူး ”
“ အဝတ်အစားတွေကို လျှော်ဖို့ အမျိုးသမီးလေး တစ်ယောက်ကို ခင်ဗျား ငှားထားတယ် မဟုတ်လား။ ဘာ့ကြောင့် ကိုယ်တိုင် လျှော်နေရတာလဲ ဗျာ။ ” ဟု အသိတစ်ယောက်က မေးသည်..။
ထိုအခါ မေးခံရသည့် ယောကျင်္ားက မသာမယာ မျက်နှာဖြင့်.....“ သူ့ကို ကျွန်တော် ယူလိုက်ပြီလေဗျာ ” ဟု ဖြေလေသည်။ သြော်...ယူမိသည့် တာဝန်များနော်............ ...
အိမ်ရှင် ။ ။ “ ဟဲ့ ကောင်မလေး၊ အိမ်မှာ ဧည့်သည်တွေ ရှိနေရင် နင့်ကိုငါ “ အက်စတာ ” လို့
ခေါ်မယ် မှတ်ထား ”
အိမ်ဖော် ။ ။ “ ဟုတ်ကဲ့ မေမေကြီး၊ ဒါထက် အိမ်မှာ ဧည့်သည်တွေရှိနေရင် ကျွန်မကရော မေမေကြီးကို
အိမ်ရှင် အမျိုးသမီးကြီး ။ ။ “ ဟယ်...ခွေးမ ”
အိမ်ဖော် ။ ။ “ ကောင်းပါပြီ............မေမေကြီး”
တစ်ခါက ကောင်လေး သုံးယောက်ဟာ ဆေးရုံ တစ်ခုကို အတူသွားကြတယ်။ ဆေးရုံရောက်တော့ ပထမ ကောင်လေး က “ ငါ ဒီကို သွေးစစ်ဖို့ လာတာ ” တဲ့။ အဲဒါ ဒုတိယကောင်လေးက “ မင်းသွေးစစ်မယ်ဆိုရင် မင်းလက်ထိပ်ကို ဆရာဝန်က အပ်နဲ့ဖောက်လိမ့်မယ်” လို့ပြန်ပြောတယ်။ ဒီစကားလည်း ကြားရော တတိယ ကောင်လေးက အော်ငိုပါလေရော။ ဒါနဲ့ ပထမနဲ့ ဒုတိယကောင်လေးက ဘာလို့ငိုရတာလဲလို့ မေးတယ်။ အဲဒါ တတိယ ကောင်လေး ပြန်ဖြေပုံက “ငါ က ဆီးစစ်ဖို့လာတာကွ“ တဲ့။
.............. ............ အဟိ
ရုံးပိတ်ရက်တစ်ရက်မှာ ပီတာလေးတို့ကျောင်းက ရှေးဟောင်းပြတိုက်တစ်ခုကို လေ့လာရေးခရီး ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ သူတို့သွားတဲ့ သမိုင်းပြတိုက်မှာ နံရံပေါ်တက်ပြီး ဆေးသုတ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ပြုတ်ကျပြီး သေသွားတာကို မြင်ခဲ့ကြရတယ်။ နောက်နေ့ အတန်းထဲမှာ ဆရာမက မနေ့က လေ့လာရေးခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကလေးတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ရခဲ့လဲဆိုတာကို ပြန်ပြီးဆွေးနွေးရင်း မနေ့က မတော်တဆမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကလေးတွေအမြင်ကို သိချင်လို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။
ဆရာမက“တပည့်တို့ကို မနေ့က မတော်တဆမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းလေမေးချ င်တယ် ”
“ကိုလတ်ကို ပထမဦးဆုံးမေးချင်တယ် ကိုလတ် မနေ့ကမတော်တဆမှုနဲ့ပတ်သက်ပြ ီး ဘယ်လိုမြင်သလဲ။” ဒါနဲ့ကိုလတ် ဆေးသုတ်တဲ့လူက နမော်နမဲ့ဖြစ်လို့ ပြုတ်ကျတယ်လို့ထင်ပါတယ် ဆရာမ။
ဒါနဲ့ ဆရာမက “အေးမှန်တယ်ကွဲ့ သားတို့သမီးတို့လဲ နမော်နမဲ့ မနေကျနဲ့ကွဲ့ ဟုတ်ပြီလား။” ဆရာမကဆက်ပြီး “မောင်မောင်ရဲ့အမြင်ကိုလဲ ပြောပါအုန်း”
မောင်မောင်က “အရက်မူးတယ်လို့ထင်ပါတယ် ဆရာမ”
ဒါနဲ့ ဆရာမက “အေးမှန်တယ်ကွဲ့ သားတို့သမီးတို့ကြီးလာရင် အရက်သေစာမသောက်စားကြနဲ့ ဟုတ်ပြီလား”ဟု ပြောလိုက်တယ်။
အဲဒါနဲ့ ဆရာမကဆက်ပြီး “ပီတာလေးကို မေးလိုက်တယ်။” “ပီတာလေးရဲ့ အမြင်ကိုလဲပြောပါအုန်း” ပီတာလေးက “ကျွန်တော့်အမေကိုဆဲလို့ပါ ဆရာမ” ဟုဖြေလိုက်တယ်။
ဆရာမလဲ အံ့အားသင့်သွားတယ် “ဘယ်လိုပတ်သက်လို့တုန်းကွဲ့ ”လို့ဆရာမက ပီတာလေးကိုမေးလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ပီတာလေးက “အဲဒီလူကြီးက” “အေဘေးလေးအောက်ကနေ လှေခါးလာမလှုပ်နဲ့”လို့ပြောလို့ပါဆရာမ။
Source: Forward Mail
ကိုချူချာ တစ်ယောက် အခုတစ်လောအလွန်ဝလာသဖြင့် အလွန်စိတ်ညစ်နေသည်။
စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် အိမ်ရှေ ့ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ရင်း သတင်းစာကို ယူကြည့်ရာ
ကြော်ဋ္ဌာတစ်ခုကို တွေ ့လိုက်ရသည်။ ကြော်ဋ္ဌာက… သင်၏ အဆီများကျဖို ့
ကျွန်တော်တို ့ကတာဝန်ယူပါသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း မည်မျှကျချင်ကြောင်းသာ
ဖုန်းနံပါတ်………..သာဆက်သွယ်လိုက်ပါဟု တွေ ့ရသဖြင့် ခေါ်ဆိုကြည့်
ရာ တစ်ဖက်မှ…ဟုတ်ကဲ့ Slim Body Group
ပေါင်မည်မျှကျချင်ကြောင်း ပြောပြပါဟုပြန်ဖြေလေသည်။ ထိ်ုအခါ
တစ်ဖက်မှ…ဟုတ်ကဲ့ မနက်ဖြန်ကစပြီး လူကြီးမင်းရဲ ့ကိုယ်အလေးချိန်
ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်း ပြန်ဖြေလေသည်။ နောက်နေ ့မနက်
အိမ်တံခါးခေါက်၍ သွားဖွင့်ရာ….ငယ်ရွယ်ချောမောလှပသော မိန်းမပျိုလေး
တစ်ယောက် အားကစားဝတ်စုံ ၀တ်လျှက် စောင့်နေသည်ကို တွေ ့ရလေသည်။ သူမ၏
လည်ပင်းတွင် ကတ်ပြားတစ်ခုချိတ်ဆွဲထား၍ ဖတ်ကြည့်ရာ…..
မိအောင်ဖမ်း..မိရင်နမ်း…ဟုတွေ ့ရသည်။ ထိုမိန်းကလေး က ဘာမှမပြောဘဲ
ပြေးထွက်သွားရာ ကိုချူချာလည်း မှီအောင်လိုက်ရတော့သည်။
၂မိုင်လောက်ပြေးလိုက်မှ ထိုမိန်းကလေးကို မိတော့သည်။ ဒီလိုနှင့်
ထိုမိန်းကလေးနောက်ပြေးလိုက်ရာ တစ်ပတ်မျြှကာသော်…အမှန် တစ်ကယ်ပင်
၅ပေါင်ကျသွားကြောင်းတွေ ့ရသည်။ ကိုချူချာတစ်ယောက်
အပျော်ကြီးပျော်သွားပြီး ယင်း Group အား ထပ်မံ၍ တစ်ပတ်အတွင်း
၁၀ပေါင်ကျချင်ကြောင်း အကြောင်းပြန်လိုက်သည်။ နောက်နေ ့တွင် ယခင်ကထက်
ဘောင်းဘီတိုလေးနှင့်စောင့်နေ သည်ကို တွေ ့ရပြန်သည်။ ထိုမိန်းကလေး၏
ထုံးစံအတိုင်း တစ်ပတ်ပြည့်၍ ပေါင်ချိန်ကြည့်ရာ တစ်ကယ်
၁၀ပေါင်ကျသွားလေသည်။ ကိုချူချာတစ်ယောက် လောဘတက်လေပြီ။ ၂ ပတ်အတွင်း
ပေါင် ၅၀ ကျချင်ကြောင်းအကြောင်းကြားရာ ထို Group က ထိုအစီအစဉ်မှာ
လွန်စွာ ပင်ပန်းကြောင်းနှင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပေါင်ချလျှင်လည်း
ရနိုင်ကြောင်းပြောပြသည်။ သို ့သော်ကိုချူချာက
ရပါတယ်..ဒီလောက်တော့အပျော့ပေါ့ ဟုပြန်ပြောကာ ၂ ပတ်တွင်ပေါင် ၅၀
ကျရန်သဘောတူလိုက်သည်။ နောက်နေ ့မနက်ရောက်၍ ၀မ်းသာအားရ
တံခါးသွားဖွင့်ရာ….တံခါးတွင်…ေထာင်ထောင်မောင်း မောင်း သန်သန်မာမာ
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကိုတွေ ့ရ၍ အံအားသင့်သွားသည်။ ထိုသူ၏ လည်ပင်းတွင်
အသုံးဝင်သော site များ
> www.engineeringforum.org Engineering
> http://forums.studentdoctor.net ဆေးပညာပိုင်း
> www.flowerpod.com.sg အလှအပပိုင်း
> www.flickr.com ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်များအတွက်
> www.youtube.com video များအတွက်
> Website Sharing
> Open Courseware
> (Massachusetts institute of Technology OCW)
> (Uhah State University OCW)
> (Johns Hopkins School of Public Health OCW)
> (Tufts University OCW)
> (Foothill-De Anza Community Collage SOFIA)
> (Carnegie Mellon Open Learning Initiative)
> Blog Search Engine
> Create New Blog
> အင်တာနက်မှ အလုပ်လျှောက်ထားခြင်း
> www.speedybit.com (Download accelerator plus)
> www.wikipedia.org ( en.wikipedia.org )
> Virus Software
> www.bitdefender.com (Bit Defender)
> www.mcafee.com (McAfee)
> www.symantec.com (Norton)
> www.free.grisoft.com (AVG:free)
> Spyware,Adware,Trojan EJ,Worms ကာကွယ်ရန်
> www.webroot.com (Spy Sweeper)
> http://free.grisoft.com (AVG Anti-Spyware)
> www.lavasoftusa.com (AD-Aware SE)
> Myanmar Novel,Journal,Magazine
> Myanmar Songs
> Educatin Potral
> Soccer Site
> Health Site
> English Learning Center
> Sattelite Site
> Internet Library
> Web Learning
> Software Driver
> English Music
> www.starhub.com (sg)
> www.singtel.com (sg)
> www.gizmosms.com (wordwide)
> www.beeonline.ru (russia)
> www.megafonmoscow.ru (russia)
> အခြားအသုံးဝင်သော site များ
> www.globalhouseplans.com (House Design)
> www.oryza.com (Rice Stock)
> www.opec.org (Oil Stock)
> www.xe.com (Money Exchange)
> www.modelsurf.com (Korea Model)
> www.jkdramas.com (Korea & Japan Model)
> www.worldtimeserver.com (Time Convert)
> တကူးတကရှာဖွေစုဆောင်းပြီး ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ N@pster
Note: copy from forwad mail.
For All Myanmar Who Is Hunting Job At Singapore
> Sunday, March 8, 2009
> Novick Trading And Consultancy
> 200 Jalan Sultan #10-05 Textile Centre
> Singapore 199018
> Ms Jolin Koh (၉၈၄၈၂၉၀၂)
> အထက်ဖော်ပြပါ Companay နာမည်နှင့် အမိျုးသမီးငယ် သည် Straite Time သတင်းစာတွင်
> Admin နှင့် Various IT position အလုပ်များကို ထဲ့သွင်းကာ
> လာလျှောက်သမျှလူတိုင်းအား စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀ တောင်းယူပြီး အလုပ်ခန့်ကာ S pass
> တင်ပေးနေပါသည်။ ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေ့အရ သူငယ်ချင်း ၃ ယောက် သီးခြားစီ
> အလုပ်သွားလျှောက်ရာ အင်တာဗျူးခေါ်ပြီး လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည်များကို
> မေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲ ငွေ ၂၀၀ တောင်းယူပြီး spass တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ သို့သော် ၃
> ယောက်စလုံး Rejected ဖြစ်ပြီး Appeal letter ထပ်တင်ပေးမည်ဟု ပြောပါသည်။ ၁လ
> ကျော်သော်လည်း မထူးခြားသဖြင့် မသင်္ကာသောကြောင့် MOM တွင်သွားရောက်စုံစမ်းသောအခါ
> Officer မှ ၄င်း company သည် သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ဘဏ်အကောင့်များ
> တင်ပြခြင်းမရှိဘဲ လူပေါင်းများစွာကို pass တင်ပေးထားကြောင်း၊ Appeal letter
> လည်းတင်ထားခြင်းမရှိကြောင်း သိရပါသောကြောင့် နောင်လာနောက်သားများ သတိပြုစေရန်
> ပြီးတော့ လူလိမ်အေးဂျင့်
> One of the guy name ko Lay [Job advertisement]
> Job Title:
> Will apply for:
> S Pass
> Contact no.:94515122
> Email: kolaysln@yahoo.com
> Under S/Pass
> (1)Programmer (SS1800-2500)Asp.net..Mysql dater base,desing wed,editing
> soft ware skill
> (2)Wed Designer($$1800-2000)
> (3)Waitress($$1800)UnderAge ( 30 )
> Medo Employment Agency(L.C-C859801G)
> #03.28 Peninsula PLZ
Note: Dear all , Above information are spread in forward mail and I believe they all met with these liars. I myself met with liar agency in singapore. His name is John and i saw his job advertisement in Straits Times Newspaper and once i saw it i applied job via email and the next working day he called me and arrangement for interview, His office is near ICA building and when i went there i saw alot of myanmar applicants. He is Singaporian ( chinese ) tall andalittle bit fat with long hair. His office isabit small and alot of flags are putting there. There i saw only him. He introduce himself as HR manager and he asked me some questions regarding about engineering like as 1. Can i draw AutoCAD? 2. Can I read electrical drawing?3 .What type of software can i use ?
After interview he told me he will apply for me EP and for that i need to pay him agent fees S$1900 and as i have no experience he will give me only S$ 1500 per month.
As deposit he asked me to give S$ 400 and if my EP approved i need to pay him another S$ 1500 but not one time. He will cut from my salary S$ 300 per month for5months. And if my EP get reject he will refund me S$ 300 .
At that time here is normal agent fees S$ 3500 at Penisula Plaza and i thought he won't be lie and it is good price.
That's why immediately i gave him S$400 and all of my documents to apply EP.
After3days he contacted me and inform me that he applied my EP via post.
If company apply pass by post normally we need to wait3weeks and this three week was lost for me .
After three weeks i checked at MOM online , it was really processing so i believed him. But next 1 week MOM rejected my application.
At that time i have got shok, and i asked to senior people and i known the truth.
According to MOM rule under 25 yrs old can't apply EP and as well as experience must have at least5years .
Suddenly i known the truth that this guy isaliar but everything was done and my sense was too late.
Next day i went to him and i asked him "why i got rejected ? "
He just answered me that "According to our company kotar I can't apply s'pass for you only EP I can apply, but now you got rejected coz of your less experience, sorry about it, I will refund you S$ 300 "
Oh my god , At that time i lost myself .
I just took S$ 300 and nodded my head from his office.
Although i wanted to talk to himalot i have no documents to prove that him. Although i wanted to report to police i have not confidenence .
That's why my hunting job in singapore was totally failured in first time.
When i came back to singapore as second time i met two of my friends they all met with him like me.
But every week he changed his name , phone no and office address.
That's why i can't describe you detail particulars of him.
Beware of long hair, chinese singaporian agent.
May all free from like this condition.
If you want to know MOM rules and regulation pl go to www.mom.gov.sg
Hope for the best foraprecious Tree
Pl forgive me Tree.
I left from here 18 months ago and i didn't just havealook coz of numeric bad reasons.
Now i haveachance to come back to here and to getashadow of this tree.
But it is too late our tree is drying and i haveashock ------------
Frankly, I have no knowledge how to aliveatree?How to take careatree ?
What kind of food should treatatree ?
I know only one thing it is how to read and how to visit to other tree.
But suddenly i gotasense that " there is nothing impossible "
Ok my lovely tree i will try as much as i can to alive you and watering you.
Pl give meaduring .......
Silent Member of Portal-enics Tree